JW Purogiramu yeUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu yaOctober 5-11, 2020
Rwiyo 45 Nemunyengetero
“Tizai Kunamata Zvidhori”: (10 min.)
Eks 32:1—Hatifaniri kunamata vamwe vanamwari kunyange zvinhu zvikaoma muupenyu (w09 5/15 11 ¶11)
Eks 32:4-6—VaIsraeri vakasanganisa kunamata kwechokwadi nekwenhema (w12 10/15 25 ¶12)
Eks 32:9, 10—Jehovha akatsamwa chaizvo nezvakaitwa nevaIsraeri (w18.07 20 ¶14)
Eks 31:17—Zvinorevei kuti Jehovha akazorora pazuva rechinomwe? (w19.12 3 ¶4)
Eks 32:32, 33—Kana zita remunhu ranyorwa ‘mubhuku raMwari’ zvinoreva kuti harichadzimwi here? (w87 9/1 29)
Kuverenga Bhaibheri: (4 min. zvichidzika) Eks 32:15-35 (th chidzidzo 10)
Vhidhiyo Yepaunoona Munhu Kekutanga: (4 min.) Kukurukurirana. Ratidzai vateereri vhidhiyo yacho mozobvunza kuti: Muparidzi ashandisa sei mibvunzo zvakanaka? Zvii zvaaita kuti azowana pekutangira paanozodzoka?
Paunoona Munhu Kekutanga: (4 min. zvichidzika) Tanga nemharidzo yekuenzanisira. Ita seuri kumuratidza vhidhiyo inonzi Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri? mokurukura zvirimo (asi usamuratidza vhidhiyo yacho.) (th chidzidzo 9)
Hurukuro: (5 min. zvichidzika) w10 5/15 21—Musoro: Nei Jehovha Asina Kuranga Aroni Paakaumba Mhuru Yegoridhe? (th chidzidzo 7)
“Koshesa Ushamwari Hwako naJehovha”: (15 min.) Kukurukurirana. Ratidzai vateereri vhidhiyo inonzi Chengetedza Ushamwari Hwako naJehovha (VaK 3:5).
Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano: (30 min. zvichidzika) jy chits. 135
Mashoko Ekugumisa (3 min. zvichidzika)
Rwiyo 90 Nemunyengetero
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe October 5-11
Purogiramu yeUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu yaOctober 5-11, 2020
mwb20 October p. 2